Heshiiskii Paul Pogba Oo Lagu Kala Adkaaday, Mbappe Oo Go'aan Cusub Ka Gaadhay Mustaqbalkiisa Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka - Gool24.Net
Heshiiskii Paul Pogba Oo Lagu Kala Adkaaday, Mbappe Oo Go’aan Cusub Ka Gaadhay Mustaqbalkiisa Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka
Sidii aad nooga barateen, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee suuqa iibka ciyaartoyga ee ay wargeysyadu qoreen maanta oo Axad ah:
Weeraryahanka reer France ee Kylian Mbappe kuma qasbi doono kooxdiisa Paris St-Germain inay iibiyaan xagaagan, sababtoo ah, saamaynt adhaqaale ee uu abuuray fayraska Korona, waxaanu 21 jirkani sii joogi doonaa naadiga haysta horyaalka Ligue 1 xili ciyaareedka kale. (L’Equeipe)
Juventus waxay ku dhowdahay heshiis ay dib ugula soo saxeexanayso khadka dhexe ee reer France ee Paul Pogba oo 27 jir ah, waxaanay Old Lady saxeexa laacibkan u isticmaalaysaa Adrien Rabiot oo ah 27 jir si ay iskaga fudaydiso culayska qiimihiisa iibka. (L’Equipe)
Laakiin tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ayay wali ka go’an tahay inuu gacanta ku dhigo kubbad-sameeyaha Manchester United. (Mundo Deportivo)
Newcastle ayaa waxay isku dayi doonaa inay iibsato laacibka garabka uga ciyaara Crystal Palace iyo xulka Ivory Coast ee Wilfried Zaha oo ah 27 jir, laakiin waa haddii Sucuudigu uu la wareego Magpies. (Sun on Sunday)
Chelsea waxay xagaagan ka heli doontaa Atletico Madrid lacagtii ay kaga iibisay Alvaro Morata, taas oo dhan £48.5 milyan, waxaanay u isticmaali doontaa inay u adeegsado sidii ay usoo iibsan lahayd Sancho. (Sun on Sunday)
Manchester City ayay ka go’an tahay inay Manchester United ku garaacaan saxeexa Thiago Almada oo ah 19 jir kubbad-sameeye ah oo u ciyaara kooxda reer Argentine ee Velez Sarsfield. (Sun on Sunday)
Arsenal waxay rabtaa inay Barcelona ka qaadato goolhayaha reer Brazil 30 jirka ah ee Neto. (Sunday Express)
Inter Milan waxay ku dhowdahay inay heshiis la saxeexato laacibka khadka dhexe uga ciyaara Napoli ee reer Belgium ee Dries Mertens oo 33 jir ah. (La Repubblica)
Tababaraha kooxda Club Brugge, Philippe Clement ayaa rajaynaya in 22 jirka reer Nigeria ee weerarka uga ciyaara kooxdiisa ee Emmanuel Denis uu tegi doono xagaaga, waxaana lala xidhiidhinayaa Arsenal, Newcastle iyo Wolves. (La Derniere Heure)
Xiddigii hore ee Barcelona iyo xulka Spain ee Xavi ayaa shaki geliyey haddii ay Camp Nou ku habboon yihiin Sadio Mane oo 28 jir ah iyo Aubameyang oo ah 30 jir la sheegayo inay xagaagan ka tegi karayaan Liverpool iyo Arsenal.
Mohamed Salah wuxuu iska diiday dalab uu ka helay Real Madrid sannadkii 2018 si uu ugu sii negaado Liverpool, sida uu sheegay tababare ku-xigeenkii hore ee xulka qaranka Masar, Hany Ramzy. (On Time Sports)